निरक्षरता उन्मूलन वर्ष घोषणा
- सरकारले मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने उदेश्यले आगामी आर्थिक वर्ष (०७१/०७२) लाई निरक्षरता उन्मूलन वर्ष घोषणा गरेको छ ।
- प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको वैठकले आगामि वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रुपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
- विगत सात वर्षमा साक्षरता अभियानको यो तेस्रो पटक नामाकरण गरिएको हो । सुरुमा वि.सं. २०६५ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएकोमा २०६९ मा अभियानको नाम परिवर्तन गरी साक्षरता नेपाल अभियान बनाइएको थियो भने यही शृंखलामा २०७१ मा निरक्षरता उन्मूलन वर्ष मनाइने भएको हो ।
- १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षरलाई साक्षर बनाउने उदेश्यले सञ्चालन गरिएको यस अभियान अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा १४ लाख ४७ हजार ३४३ जना निरक्षरलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य छ ।
- अन्तिम अभियानको रुपमा यस निरक्षरता उन्मूलन वर्षको समाप्तीपछि आगामी २०७२ को शुरुमा नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुकको रुपमा घोषणा गर्ने उदेश्य राखिएको छ ।
- नेपालले पनि ९५ प्रतिशत साक्षर भएकालाई पूर्ण साक्षरका रुपमा घोषणा गर्न पाइने अन्तराष्ट्रिय प्रचलनलाई स्वीकार गरेको छ ।
1 परमाणु सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलन
2 सुधारिएको चुलो
3 केही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरु
4 वायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणाली
5 सुशासन भनेको के हो ?
6 Career News and Info जेठ १८, २०७४
7 के हो ओटिसी बजार ?
8 गुड फर पेमेन्ट चेक(Good for Payment Cheque)
10 राजस्व प्रशासन